RASMI: Man United oo xirtay xarunteeda tababarka & wararka ku saabsan dib u dhigista kulanka Brentford – Gool FM
RASMI: Man United oo xirtay xarunteeda tababarka & wararka ku saabsan dib u dhigista kulanka Brentford
Dajiye December 13, 2021
(Manchester) 13 Dis 2021. Kooxda reer England ee Manchester United ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay xirtay xarunteeda tababarka kaddib markii laga helay caabuqa Korona Fayras xubno ka tirsan shaqaalaha kooxda iyo ciyaartoyda.
Warbixino lagu daabacay warbaahinta ayaa lagu sheegay labadii maalmood ee la soo dhaafay in in ka badan hal qof oo ka mid ah shaqaalaha farsamada iyo maamulka kooxda koowaad la xaqiijiyay in uu soo ritay caabuqa Korona Fayras, waxaana sidoo kale intaas sii dheer in ka badan hal ciyaaryahan oo aan magacyadooda la shaacin.
Warbixinada wargeysyada ayaa waxay tilmaameen in Manchester United ay sameyn doonto baaritaan kale oo loogu talagalay kuwa la xaqiijiyay inay qabaan caabuqa Korona Fayras.
Kaddib natiijadii ugu dambeysay ee soo baxday, maamulka kooxda ayaa go’aansaday in la xiro xarunta tababarka naadiga Manchester United markii ugu horeysay muddo 24 saacadood ah, si looga hortago in caabuqa Korona Fayras uu ku faafo gudaha kooxda.
Shabakadda rasmiga ah ee Manchester United ayaa lagu sheegay in shakhsiyaadka laga helay caabuqa Korona Fayras durba la karantiilay, sida uu qabo nidaamka Premier League.
Manchester United ayaa bayaan ay soo saartay waxaa lagu daabacday website-keeda wuxuuna u qornaa sidan:
“Marka loo eego joojinta tababarka iyo carqaladeynta kooxda, iyo in mudnaanta la siinayo caafimaadka ciyaartoyda iyo shaqaalaha, kooxda waxay kala hadlaysaa Premier League haddii ay ammaan tahay in la sii wado taariikhda kulanka Talaadada ee Brentford.”
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in dib loo dhigay safarka kooxda iyo xubnihii la socday ee magaalada London, iyadoo la sugayo natiijada ka soo baxda wada-hadallada lala yeelan doon.
DEG DEG: PSG vs Real Madrid, Inter vs Liverpool… (Isku aadka wareegga 16-ka UEFA Champions League oo lagu celiyay)
Horudhac: Manchester City vs Leeds United... (Man City oo caawa jebin karta labo rikoor oo u yaalla Liverpool)